Golaha Wasiirrada Oo Maanta kulmay – idalenews.com
Golaha Wasiirrada Oo Maanta kulmay
Kulan ay maanta xubnaha golaha wasiirrada yeesheen oo uu shir gudoominayey Rai’sul wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) ayaa waxa ay kaga hadleen hoos u dhaca sarifka iyo korarka maciishadda iyo arrimo kale oo ku saabsan howlaha horyaala.
Ugu horeyntii waxa ay Goluhu warbixinno ka dhageysteen qaar kamid ah wasiirrada oo dalka dibaddiisa safar shaqo ku tagay, dhageysiga warbixinnadooda kadibna waxa ay ka doodeen hoos u dhaca sarifka iyo korarka maciishada waxa ayna golaha isku afgarteen in wasaaradaha maalliyadda iyo ganacsiga loo xilsaaro xal u helida arintan oo shacabka soomaaliyeed dhibaato kunoqotay maadaama sarifkina uu dhacay maciishadina ay qaaliyoowday.
Wasiir kuxigeenka wasaaradda warfaafinta mudane C/shakuur Cali Mire ayaa saxaafadda lahadlay markii uusoo gaba gaboobay kulankii golaha wasiidrada waxa uuna faah faahin ka bixiyay qodobka hoos u dhaca sarifka iyo saameynta uu ku yeeshay shacabka oo ay maanta si aad ah uga doodeen golaha Wasiirrada.
Sidoo kale xubnaha golaha wasiirrada kulankoodii maanta waxa ay kumeel mariyeen sharciga maamul u sameynta goballada dalka oo ay wasaaradda arimaha gudaha hor keentay,waxaana Wasiir Ku Xigeenka Wasaaradda Warfaafinta,Boostada,Isgaarsiinta iyo Gaadiidka Mudane C/shakuur Cali Mire uu tilmaamay in sharcigaasi ay golaha Wasiirrada ansixiyeen lana horgeyn doono Xildhibaannada Baarlamaanka Soomaaliya si uu u noqdo mid sharci ah.
Maxkamada G/Banaadir oo dib u dhigtay dacwada loo heysto Wariye C/casiis Koronto iyo Haweeneydii la kufsaday
Madaxweynaha oo wareysi gaar ah siiyey Tv-ga Qaranka DAAWO VIDEO